China Turck Toolbox vagadziri uye vanotengesa | YSXF
MUDZIMAI WEMAHARA WEZVINONYANYA KUKWEDZA NOKUTAKURA - Iri bhokisi rematurusi rakagadzirwa neyakaomarara asi isina huremu hwekuvaka kukwira kumberi kweA-Freyera mataera mataera. Nyore kuungana, yakanaka kutakura kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe kana zvichidikanwa. Mhinduro huru yekuchengetera maturusi ako kana zvinhu mugaraji rako uye inowedzera imwe nzvimbo yekuchengetera kune yako yakavharika tirera.
✅ DURABLE DIAMOND RUGGED DESIGN - Yakagadzirwa ine rugged aluminium ine yakazara welded seams, yekushandisa zvisina kunaka. Yekuchengetera bhokisi rekushandisa rinodzivirira zvinhu zvako kubva kune yakaipa mamiriro ekunze, uye iyo dhayamondi dhizaini inochengetedza chimiro chayo kwemakore anouya. Bhokisi rinokiyiwa richaisa dzimba dzakadzika, mavhiri emakumbo, mabhanhire, mabhokisi ematurusi, uye mamwe magiya akakosha.
ID KUSVIRA KUNOGONESESA ZVESE KUTI KUSHANDISWA KUSHANDISWA- Iyo yakadzika hinge inobvumira iyo yepamusoro kuvhura zvachose kunyangwe kana yakakwenenzverwa yakanangana nekaravhani yako, uye inoita kuti igare kuwedzera kana kubvisa zvinhu kana yangosungirirwa mutrailer. Inobvisa kudiwa kwekudzikisa bhokisi rako rekushandisa kubva parurimi kuti uwane maturusi ako.
✅ DZIMWE DZIMA DZINOGARA DZIVA NESANGANO- Chengeta zvimwe zvekushandisa nezvinhu. Zvinhu zvako zvinokwana zvakachengetedzeka nekuda kwekiyi inobata bhokisi rakavharwa kana uchidhonza turera. Iwe unogona kutora izvo zvaunoda pasina kunetseka nezve nzvimbo. Usambofa wakakanganwa chishandiso nekuchengeta ako ese maturusi akarongeka uye akadzivirirwa mukati mealuminium rurimi rwekuchengetedza bhokisi.
SAT KUGutsikana KWAKO NDEYEDU # 1 YAKAKOSHA- Gomba Posse's Trailer Rurimi Kuchengetera Bhokisi reMatrailer rakagadzirirwa kupindura yako yekuchengetedza zvaunoda. Tine chivimbo chekuti urikuda bhokisi redu rematurusi. Kana usiri 100% kugutsikana isu tinokupa iwe izere mari kana yemahara kuchinjana, hapana mibvunzo yakabvunzwa. Tinopa makore mashanu ekugadzira warandi, taura nesu, uye isu tichafara kubatsira.
Iyo Pit Posse Trailer Rurimi Bhokisi ichachengetedza zvinhu zvako uchitaridzika zvakanaka!
Yakagadzirwa nealuminium yakasviba ine seams yakazara yakasunganidzwa, iro rekudzivirira remamiriro ekunze rakanakira kutakura maturusi ako uye zvishongedzo kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe zvinobudirira, kana kuchengeta zvishandiso zvako mugaraji uchizvichengeta zvakachengeteka uye zvakagadzirira rwendo runotevera.
✔️ 34 "mukati. Musana wakapamhama kumashure, 17.5 pamberi paupamhi, 18 murefu, 20.5 pakadzika, uremu makumi maviri nemaviri mapaundi
✔️ Taper yakagadzirirwa aerodynamics ine offset gasi strut kuti ishande zvakanaka uye nyore kuwana
✔️ Dhayamondi dhizaini kuvaka inoramba ichitaridzika zvakanaka kwemakore anouya
✔️ Yakadzika yakadzungirirwa hinge inobvumira iyo yepamusoro kuvhura kunyangwe kana yakakwenenzverwa pakatarisana neturera yako zvizere
Takura zviri nyore maturusi ako uye magiya mubhokisi rakasimba parurimi rwetrailer yako kuti uwane nyore pasina kuvhura karavhani yako kana kuchengetedza maturusi ako pachigaro chekumashure kwetiraki yako.
Wedzera kuKitori IZUVA UYE NAKIDZWA NEZVIMWE ZVINOGONESESWA CHINYORWA CHEMAZUZO ANOKOSHA PURE!
Pashure: Frozen Chikafu Indasitiri Aluminium Zvigadzirwa
Zvadaro: Aluminium Alloy Bhokisi Rekushandisa
Yedu MaxxHaul Trailer Tongue Bhokisi rakagadzirirwa kumisikidza kumatrailer ane A-Rimi furemu kuti ipe yakawedzera kuchengetedza maturusi ako, musasa magiya, chengetedzo ngetani, tambo, mabutiro emotokari, zvekunze zvekunze, tambo, hitch accessories, tambo, vhiri choki uye nezvimwe zvakawanda. . Usambofa wakakanganwa chishandiso kana giya paunenge uchizvida! - Yakagadzirwa kubva mukusimba uye ngura-inodzivirira mwenje-mu-uremu aluminium zvinhu ine yakazara welded musono kuvaka uye kuomarara upfu jasi kupedzisa - Diamond ndiro pa ...